Google Panda oo Af Ingiriisi Cadaan ah | Martech Zone
Google Panda oo ku qoran af Ingiriisi toos ah
Arbacada, February 1, 2012 Douglas Karr
Way adag tahay in la aamino inaan soo soconno hal sano tan iyo markii Google uu ku soo jiiday kicinta cusbooneysiinta algorithm ee loogu magac daray Google Panda. Ma aysan imaanin qaar la'aan xanuunka Google iyo, ugu dambeynti, istiraatiijiyado loo ka soo kabashada Google Panda.
Sannad ka dib markii la jeexjeexay waxa Google u arko inay yihiin "spammy", sidee Panda kuu saameysay? Waxaa jiray wada hadal aan joogsi lahayn oo u dhexeeya suuqleyda internetka iyo SEO-yada ku saabsan sida looga ilaaliyo bartaada Panda, laakiin dhammaan wixii cusbooneysiin iyo dib-u-habeyn ah ee isbeddelka algorithm-ka, waxyaabo ayaa si dhakhso leh u wareeri kara.
Sawir gacmeedkan, Google Panda oo ku qoran af Ingiriisi toos ah, waxaa laga yaabaa inuu yahay mid ka mid ah faahfaahinta ugu cad cad ee aan ku arkay isbeddelka Google Panda iyo talooyinka ku xiga ee shirkadaha ku khasbaya inay si gardarro ah u raacaan tabaha farsamaynta mashiinka raadinta.
Tags: Panda googlealgorithm google pandasoo kabashada panda googlealgorithm raadinta google
Ku dhiirrigelinta Tinderbox-ka Super Bowl-ka!